अबको २ दिनपछि यी ३ राशिको भाग्य नै बदलिनेछ, सफलताको उचाईमा पुग्नेछन् ! – List Khabar
Home / रोचक / अबको २ दिनपछि यी ३ राशिको भाग्य नै बदलिनेछ, सफलताको उचाईमा पुग्नेछन् !
अबको २ दिनपछि यी ३ राशिको भाग्य नै बदलिनेछ, सफलताको उचाईमा पुग्नेछन् !
admin January 12, 2022 रोचक Leaveacomment 334 Views
२ दिनपछि मकर संक्रान्ति पर्व मनाइँदैछ। धर्मसँगै यो पर्व ज्योतिषको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण पर्व हो किनभने यस दिन ग्रहहरूका राजा सूर्य धनु राशि छोडेर मकर राशिमा प्रवेश गर्ने गर्दछन्। तर यस वर्ष मकर संक्रान्ति पर्व निकै विशेष बन्ने भएको छ। यस दिन सूर्य र शनिको मकर राशिमा मिलन हुनेछ।
२९ वर्षपछि बन्यो यस्तो संयोग
२९ वर्षपछि यस्तो संयोग भएको हो। यसअघि सन् १९९३ मा शनि र सूर्यको भेट मकर राशिमा भएको थियो। शनिले सुस्त गतिमा घुम्ने र साढे दुई वर्षमा राशि परिवर्तन गर्ने भएकाले फेरि एउटै राशिमा पुन: पुग्न ३० वर्ष लाग्छ। मकर संक्रान्तिमा अवस्थित शनि र सूर्यले २ दिनपछि १४ जनावरी २०२२ मा प्रवेश गर्दा ३ राशिका मानिसलाई ठूलो लाभ मिल्नेछ।
सिंह राशिको स्वामी सूर्य हो। शनि-सूर्यको यो योगले सिंह राशिका व्यक्तिहरूलाई धेरै ठूलो अवसर दिनेछ। यी अवसरहरू जीवन परिवर्तन गर्ने अवसरहरू साबित हुनेछन्। सूर्य एक महिना यस स्थितिमा रहनेछ। यो समय यस राशिका व्यक्तिहरुको लागि धेरै शुभ साबित हुनेछ। पदोन्नतीको सम्भावना रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा तपाईंको मन-सम्मान बढ्नेछ।
धनु राशिको स्वामी बृहस्पति ग्रह र सूर्यको मित्रताका कारण यो राशिका लागि यो समय निकै शुभ रहनेछ। आकस्मिक धन लाभ प्राप्त हुने सम्भावना रहेको छ। समग्रमा यो समयले आर्थिक स्थितिलाई महत्वपूर्ण बल दिनेछ। कुनै पनि ठूलो इच्छा पूरा हुन सक्छ। सरकारी जागिर गर्ने इच्छा र तयारी छ भने सफलता मिल्ने प्रबल सम्भावना छ।
मीन राशिका लागि पनि यो समय निकै लाभदायी रहनेछ। आम्दानी बढ्नेछ। पद र धन दुवै प्राप्त हुनेछ। यसले तपाईको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनेछ र समाजमा सम्मान पनि बढ्नेछ। सरकारी वा राजनीतिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण पद वा जिम्मेवारी पाउन सक्छन्।
Previous अनिल कपुर र रणवीरको फिल्म ‘एनिमल’मा नेपाली अभिनेता बिपिन कार्की खेल्ने
Next गायक यम बरालले गरे दोस्रो बिहे, भित्र्याए काँग्रेस नेतृ